Hatifanirwe kudyiwa: Mugadza
You are at:Home»NHAU DZEMITAMBO»Hatifanirwe kudyiwa: Mugadza
MURAIRIDZI wemaMighty Warriors, Rosemary Mugadza, anoti chikwata chake chine gomo guru rekukwira svondo rino apo chiri kusangana neShepolopolo yekuZambia mumutambo wekurwira tikiti rekuenda kuAFCON Women’s Tournment kuAngola gore rino.
Mumutambo wekutanga wakatambirwa muno masvondo adarika kunhandare yeRufaro, maMighty Warriors akakundwa 1-0 izvo zvakashamisa vatsigiri vazhinji.
Kukundwa kwakaitwa maMighty Warriors pamusha kunoreva kuti svondo rino anotofanirwa kurwa amire mumutambo uyu. Kuti maMighty Warriors abudirire kuenda kuAFCON iyo ichatambirwa kuNamibia, anofanirwa kukunda Zambia 2-0 iwo asinganwiswewo.
Asi Shepolopolo ikanwisa chete zvinobva zvaomesera maMighty Warriors ayo anenge ave kufanirwa kunwisa katatu kuti ahwine.
“Tiri kuda chaizvo kuhwina svondo rino nekuti vatambi vakashanda nesimba kuti vasvike pavari.
“Hazvisi nyore asi ticharwa nepatinogona kuti tiende kuZambia kunohwina.
“Tikakundwa chete ndinoona zvisingatifambire kana morari yechikwata chedu inobva yadzikira nekuti munhu wese ari kushanda nesimba kuti tihwine tigonokwikwidza kuAFCON.
“Ndinoziva kuti takadzikama tichapinda mumutambo uyu tichitsvaga kuhwina chete kwete zvimwe zvakawanda,” akadaro Mugadza. “Ndinoona sekunge zviri nyore tikanotambira kuZambia pane kutambira muno.
“Kutambira pamberi pevatsigiri venyu kunonetsa sezvo munenge muchipihwa mutoro wakanyanya nevatsigiri, saka ndinoona kuti mutambo uyu uchange uri nyore kutamba.
“Asi kuti tihwine tinofanirwa kutamba nhabvu yemandorokwati,” akadaro Mugadza. Zvakadaro, nyika yese yave kuisa tariro yayo kumaMighty Warriors zvichitevera kukundwa kwakaitwa chikwata chevarume chemaWarriors neTanzania svondo rapera.
MaWarriors akarwadzisa mwoyo yevatsigiri vazhinji venhabvu avo vaitarisira kuti ahwinhe agoenda kunokwikwidza kuAFCON 2015 kuMorocco. — BBC.